War | Xaysimo | War deg deg ah | Page 3
Ciidamada Ukraine oo ay soo wajahday gabaabsi saanadda dagaalka
Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay gabaabsi ka yihiin saanadda dagaalka, xilli ay dagaallo culus kula jiraan ciidamada Ruushka ee duullaanka ku soo qaadday.
Sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP, Vitaly Kim, oo ah barasaabka gobolka Mykolaiv ee jiidda hore ee koonfureed, ayaa sheegay in dagaalku uu noqday “dagaal madaafiic la isku adeegsado “. Waxa uu intaa ku daray in ciidamada Ruushka ay aad uga awood badnaayeen, halka ciidamada Ukraine ay ka sii dhamanayaan madaafiicda.
Waxa uu ku booriyay xulafada reer galbeedka in ay soo dedejiyaan inay soo gaarsiyaan hubka riddada dheer iyo rasaasta si ay uga caawiyaan Ukraine in ay qaado weerar rogaal celis ah.
Fahad Yaasin oo Raysal Wasaare Rooble ku eedeeyay in uu wax ka ogaa dilkii Ikraan
Taliyihii hore ee Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin oo Waraysi bixiyey ayaa dilkii Ikraan Tahliil dusha u saaray Sadex masuul oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya kuwaas oo kala ah Raysal Wasaare Rooble, Mahad Salaad oo ah agaasimaha Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya iyo Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Al Cadaala.
Fahad Yaasin oo arrintaas ka hadlaya ayaa wuxuu yiri “Gabadhaan waxaa marka hore la geeyay xafiiska Raysal Wasaaraha,Waxay ahayd shaqo doon,kadib Mahad Salaad ayaa gaadhi kusoo qaaday, waxaana la geeyay Daarusalaam, kadibna meel Jilib udhow ayaa lasii geeyay, halkaas ayaana lagu dilay, waxaana dilka fuliyay Mahad Karataay oo Xidhiidh dhow ay leeyihiin Mahad Salaad” “Gacanta fulisay dilka Ikraan Tahliil waxaa lahaa Mahad Salaad cidda dishayna waa Al-Shabaab, Farsamadana waxaa lahaa Al Cadaala, Raysul wasare Rooble wuu kawarqabay, aakhiro iyo aduun waxaa la weydiin doonaa Insha Allah Raysal Wasaare Rooble.”
Faahfaahin: Madaafiic xalay lagu garaacay xaafado ku dhow garoonka Aadan Cadde
Faah-faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa tiro madaafiic ah oo xalay abbaare 01:45 habeenimo lagu garaacay xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho, xilli maanta la calaamo-saarayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Sida ay xog ku heshay Caasimada Online, Illaa toddoba madfac ayaa ku dhacay xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, soona xiga dhanka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac.
Qaar ka mid ah madaafiicda ayaa ku dhacay guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo xilligaas hurdayey, waxaana ku dhaawacmay 8 qof oo isku qoys ah, ayada oo sidoo kalena qof kale oo shacab ah, oo ka tirsan qoys kale uu ku dhintay.
Laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya iyo kooxaha gurmadka degga ah ee magaalada Muqdisho ayaan wax faah-faahin ah bixinin weerarkaan iyo khasaaraha ka dhashay.
Weerarka ayaa imanaya ayada oo magaalada Muqdisho lagu soo rogay bandow soo billaabmay saacaddu marka ay ahayd 10:00-kii habeenimo ee xalay, kaas oo lagu adkaynayo ammaanka magaalada oo la filayo in Khamiista maanta ah ay ka qabsoonto xafladda caleemo-saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Magaalada ayaa la filayaa inay soo gaaraan madaxweynayaal, ra’iisul wasaareyaal iyo madax kale oo ka qeyb-galeysa caleemo-saarka, waxaana jirta cabsi ku saabsan in madaafiic kale maanta lagu weeraro hoolka calaamo-saarka ee Afisyoone.
Weli ma jirto koox sheegatay mas’uuliyadda madaafiicdii xalay, hase yeeshee weerarada noocaan ah ayaa waxaaa horey mas’uuliyaddooda u qaadan jiray kooxda Al-Shabaab.
Fahad Yaasiin oo sharaxay sababta kiiskii Ikraan Tahliil u weynaaday
Waxaa mar kale dib usoo cusboonaaday hadal haynta kiiska Ikraan Tahliil, oo ahayd mid ka mid ah saraakiisha Hay’adda Nabad Sugidda iyo Amniga qaranka.
Gabadhan oo madax ka ahayd qaybta dambi baarista internet-ka ayaa la wayaay dabayaaqadii bishii June ee sanadkii 2021-kii, kaddibna waxaa soo shaac baxay warar sheegaya in la dilay.
Hay’adda NISA oo ay ka tirsanayd ayaa lagu eedeeyay in ay dilkeeda mas’uul ka yihiin, inkastoo ay dhankooda iska fogeeyeen. Xog kasoo baxday Nisa ayaa lagu sheegay in baaritaanno la sameeyay lagu ogaaday inay Ikraan afduubteen Al-Shabaab kaddibna dileen.
Hase yeeshee kooxda Al-Shabaab ayaa dhankeedana beenisay inay ku lug lahayd maqnaashaha iyo dilka gabadhaas, taasoo sababtay in uu jah wareer badan hareeyo kiiskan.
Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Amniga Qaranka, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud oo loo yaqaanno Yaasiin Fareey, ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay oo baraha bulshada lagu shaaciyay ku faahfaahiyay marxaladihii ugu horreeyay ee kiiskan.
Kiis ka duwanaa kiisaskii hore
Yaasiin Fareey oo marka uu billaabanayay kiiska Ikraan ahaa madaxa qaybta guud ee nabad sugidda gobolka Banaadir ayaa sheegay in “isaga loo xil saaray baaritaankii ugu horreeyay ee lagu sameeyay arrintan, tallaabadii ugu horraysayna uu isagu qaaday”.
“Kiiskaas wuxuu aniga iga soo gaaray, maadaama aan madax ka ahaa gobolka, in Ikraan la waayay 28-kii bishii June kaddibna maadaama aan anigu gobolka joogay, taliyihii hay’addana uu dalka ka maqnaa waxaa aniga la ii xil saaray in kiiskaas aan baaritaan ku sameeyo,” ayuu yiri.
Waxa uu sheegay in xogtii baaritaankiisa oo dhammaystiran uu la wadaagay madaxdii hay’adda NISA, oo uu ugu horreeyay taliyihii xilligaas, Fahad Yaasiin, oo dalka dib ugu soo laabtay.
“Guddi baaritaan oo ka socday Maxkamadda Ciidamada iyo hay’adda Nisa ayaa si wadajir ah u baaray kiiskaas, xogta oo dhammaystiranna waxay taallaa Maxkamadda Ciidamada iyo xafiiska Hay’adda Nabad Sugidda,” ayuu yiri Yaasiin Fareey.
Kiiska Ikraan ayuu Yaasiin carrabka ku adkeeyay in la siyaasadeeyay, waxyaabo badan oo been ahna laga sheegay, “ilaa hadda waxa laga og yahayna ay tahay oo kaliya in la waayay Ikraan”.
Taliyihii hore ee Nisa, oo hadda ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhanka kale sheegay in kiiska Ikraan Tahliil uu ahaa mid ka duwanaa kiisaskii horay usoo maray ha’adda uu ka shaqeynayay.
“Wuxuu kiiskan kuwii kale uga duwanaa inuu dhacay xilli uu dalka ku jiray marxalad adag, taas ayaana kalliftay in uu kiiskan saamayn badan yeesho, laakiin aniga ma aaminsani in uu ka duwan yahay wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee wax bartay ee iyagoo nool oo caafimaad qaba u bareeray inay naftooda iyo maalkooda u huraan dalka iyo dadka Soomaaliyeed.”
Taliyaha cusub ee horay qaybta uga ahaa ololaha caddaalad raadinta Ikraan
Khilaaf xoog leh ayaa ka dhashay sida loo maareeyay arrimaha ku saabsanaa Ikraan Tahliil, madaxdii hore ee Nisa ayaana marar kala duwan lagu dhaliilay in ay wax ka ogaayeen.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa mar warbaahinta ka sheegay inuu ka warqabo ciddii dishay gabadha xubinta sare ka ahayd hay’adda nabad sugidda Soomaaliya.
Laakiin hadda waxaa hoggaanka hay’adda Nisa la wareegay xildhibaan Mahad Salaad, oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii sida wayn ugu ololeynayay sidii ay caddaalad ku heli lahaayeen qoyska Ikraan Tahliil.
Inkastoo uu kiiskan hor yaallo maxkamadda ciidamada qalabka sida, haddana dad badan ayaa ka war dhowraya tallaabada uu qaadi doono Mahad Salaad ee la xiriirta arrintan.
Muxuu kiiska horay uga yiri Mahad Salaad?
Markii bishii November uu soo baxay warka ku saabsan dilka Ikraan Tahliil ayaa waxaa uu Mahad Salaad shaki galiyay cidda ka dambeysa dilka isaga oo taliyihii xilligaasi ee Nisa Fahad Yaasiin ku eedeeyay dilkeeda.
“Al-Shabaabka Fahad Yaasiin sheegay in ay dileen Ikraan Tahliil waa ISAGA. Isagaa dilay, duugayna Ikraan Tahliil. Ehelada Ikraan waxaan kula talinayaa in ay furtaan gal dacwadeed Fahad ka dhan ah,” ayuu xilligaas ku yiri qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay.
Xildhibaan Mahad ayaa marar badan ku celceliyay waqti ay doonto ha qaadatee “in Ikraan iyo qoyskeeda ay caddaalad heli doonaan”.
Wararka iska soo taraya kiiska Ikraan ayaa soo xoogaystay tan iyo markii ay soo idlaatay doorashada Soomaaliya ee madaxweynaha loogu doortay Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha Ruushka oo muujiyay inuu ka xun yahay aflagaada loo geystay Nabi Muxamed NNK
Waddamada Muslimka ah ayaa si adag uga soo horjeestay hadalladii muranka dhaliyay ee afhayeenkii hore ee xisbiga BJP Nupur Sharma ee ku saabsanaa Nebi Muxamed NNKH, sida lagu baahiyay baraha bulshada, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sidoo kale muujiyay sida uu uga xun yahay hadalladii muranka dhaliyay ee loo jeediyay Nabi Muxamed ee dowladda Hindiya.
Hadalka Putin ayaa 24-kii saac ee la soo dhaafay si weyn ugu faafay baraha bulshada ee Hindiya iyo dalalka Carabta kaddib markii Putin oo la talinayay Hindiya isagoo ku guda jira shirkiisii ​​jaraa’id ee sanadlaha ahaa yiri, “Aflagaadada Nabi Muxamed waxay ku xad-gudbeysaa xorriyadda diinta taas oo dhaawacday shucuurtii muqaddaska ahayd ee dadka Islaamka.”
Russian President Putin has said insulting Prophet Muhammad by Indian ruling party is unacceptable and violation of religious freedom & civil values.#إلا_رسول_الله_يا_مودي. #الهند #Stopinsulting_ProphetMuhammad #Russia pic.twitter.com/9KLfGwQ5Dn
Falcelinta hadalka laga soo xigtay Putin ayaa aad ugu baahday baraha bulshada gaar ahaan barta Twitter oo in ka badan 50 kun oo jeer la wadaagay gaar ahaan Hindiya iyo dalalka Carabta.
Isla sawirka hoose waxaa ku yaal bayaan ku saabsan Nebi Maxamed iyo Islaamka oo la soo xiganaya madaxweyne Putin, kaasoo dadka isticmaalay qaarkood ay ku sheegayaan sida Putin uu uga hadlay Hindiya.
Muxuu horay Putin uga yiri Islaamka goormaa ayayse ahayd?
Sida ay sheegtay warbaahintu, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, ayaa shirkiisii ​​jaraa’id ee sanadlaha ahaa ee 23-kii December ee sanadkii hore, waxa uu ku sheegay hadal la xiriira kaartuunkii Charlie Hebdo ee Faransiiska ee muranka dhaliyay.
Waxa uu yiri: “Marnaba qayb kama aha xeerka xornimada hadalka ee qof walba uu u heysto inuu fikirkiisa cabbiri karo.”
“Aflagaaddada ka dhanka ah Nabiga waxay meel uga dhaceysaa xorriyadda diimaha, waxayna ku xadgudbeysaa dareenka dadka heysta diinta Islaamka,” ayuu yiri Putin, sida ay tebisay Wakaaladda Wararka Ruushka ee TASS.
Madaxweyne Putin ayaa carrabka ku adkeeyay in ficillada noocaas oo kale ah ay kicinayaan aargoosiga kooxo xagjir ah, sida weerarkii lagu qaaday Majalladda Charlie Hebdo ee magaalada Paris kaddib markii ay daabacday sawirro kartoon ah oo lagu dhaawacayo sharafta Nabiga (NNKH).
Shacabka Ruushka ayuu ku boorriyay in ay dhammaantood isku tixgeliyaan dhaqamada iyo diimaha ay kala heystaan, isagoo intaas ku daray in waddankiisa uu yahay mid ku dhisan “dhaqamo aad u kala duwan” oo aan la mid ahayn dalalka kale ee caalamka.
Hase yeeshee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan weli wax falcelin ah ka bixin khilaafka u dhexeeya Nupur Sharma iyo dalalka Islaamka ee ku qotoma Nebi Maxamed NNKH.
Sawirkii hore ee Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan iyo Putin
Sawirka Putin iyo Boqorka Sacuudiga Salmaan oo haatan aad loogu wadaagayo baraha bulshada, ayaa marka la isticmaalo barnaamijka Google-ka ee dib-u-eegista sawirka ayaa muujinaya in sawirka uu yahay sanadkii 2019 markaasoo Madaxweynaha Ruushka uu booqday Sacuudiga.
Dalalka Imaaraadka, Cumaan, Indonesia, Ciraaq, Maldives, Urdun, Liibiya iyo Baxrayn ayaa ku biiray liiska sii kordhaya ee dalalka caalamka Islaamka ee cambaareeyay hadalkaas. Horay hadalkaas waxaa u cambaareeyay Kuwait, Iran iyo Qadar waxayna u yeereen safiirrada Hindiya caradooda ka dhanka ah arrintan darteed. Sacuudiga ayaa sidoo kale cambaareeyay hadalkaas Isniintii la soo dhaafay.
Diblomaasiyiinta Hindiya ayaa isku dayay inay dejiyaan dalalkan – waxay xiriir saaxiibtinimo la wadaagtaa intooda badan dalalkan – laakiin duufaantu waa mid aad uga fog intaas.
Nupur Sharma, oo ah afhayeenka rasmiga ah ee xisbiga Bharatiya Janata Party (BJP), ayaa hadalkan ka sheegay dood telefishin, halka Naveen Jindal, oo ah madaxa warbaahinta ee xisbiga Delhi, uu arrintan soo dhigay bartiisa Twitter.
Faallooyinkaas – gaar ahaan tii M Sharma – waxa ay ka caraysiisay bulshada Muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee dalkaas, taasoo keentay mudaaharaadyo goosgoos ah oo ka dhacay gobollada qaar.
Labadan masuul ayaa raaligelin guud ka bixiyay, wuxuu xisbigu shaqadii ka joojiyay Sharmaa.
Turkiga oo dagaal ku qaadaya jabhad uu Mareykanka Taageero
Turkiga ayaa wacad ku maray inuu dagaal ku qaadayo Jabhadda SDF ee ka dagaallanta Waqooyiga dalka Suuriya.
Ciidamada Kurdiyiinta ee ku sugan Suuriya dhankooda waxay sheegeen in ay la shaqeyn doonaan ciidamada dowladda Suuriya si ay uga hortagaan duulaanka cusub ee Turkiga uu ku hanjabay inuu ku soo soo qaadayo xoogagga SDF ee ku sugan waqooyiga dalkaasi.
Xoogagga Dimuqraadiyadda Suuriya ee SDF oo uu Mareykanka taageero waxay sheegeen go’aanka ah iney tageeraan ciidamada Suuriya ay gaareen kaddib marki ay taliyeyaasha ugu sarreysa ay shir degdegah yeesheen.
Toddobaadyadi u dambeeyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu qorsheynayey sidi loo bilalabi lahaa dullaan hor leh oo lagu qaadayo waqooyiga Suuriya oo ay weli gacanta ku hayaan xoogagga SDF.
Turkiga wuxuu xoogagga SDF uu ku eedeeyaa iney gacan saar la leeyihiin fallagada Turkiga uu argagaixisada u aqoonsan yahay ee PKK oogudaha Turkiga ka dagaallanta.
Cunto yarida iyo nafaqadarrada ka jirta Soomaaliya oo laga deyrinayo
Cunto yarida iyo nafaqadarrada ka jirta Soomaaliya ayaa laga cabsi-qabaa inay horseeddo macaluul dalka ka dilaacda xilli markale uusan si wanaagan u di’in roobkii la filayay.
Dhanka kale waxaa cirka isku shareeray qiimaha la kala siisto raashinka halka dedaallada gargaarka bini’aadamnimo ay liitaan sababo la xiriira dhaqaale wanaagsan oo aanay helin hay’adaha gargaarka.
Arrintaas ayaa waxa ay sababtay in boqolkiiba 160% ay sare u kacaan dadka cunto yarida ku soo dhacaya, kuwa gaajoonaya iyo kuwa cudurrada ay ugu dhaceen gudaha Soomaaliya.
Ruushka oo sheegay in uu geystay weerarro uu qasaare ku gaarsiyay Ukraine
Ruushka ayaa ku andacoonaya in uu burburiyay dhismayaal warshadeed oo ku yaallay warshad dayactir ku samaynaysay baabuurta hubaysan ee Ukraine oo ku taalla gobolka Kharkiv.
Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in diyaarad kale oo militariga Ukraine la soo riday, sidoo kale.
Ruushka ayaa sidoo kale sheeganaya in 18 kale oo kamid ah, taangiyada Yukreen ayaa sidoo kale la burburiyay waxaana la dilay 450 oo kamid ah dagaalamayaasha Ukraine.
UK oo sheegtay in ay hub u diri doonto Ukraine
Xoghayaha gaashaandhigga ee waddanka Britain, Ben Wallace, ayaa waxa uu ku dhawaaqay in UK ay tiro aan badneyd oo ah hubka laga rido gantaallada ridada dheer iyo rasaasba u diri doonto Ukraine.
Mr Wallace ayaa sheegay in hubkaasi uu Ukraine ka caawin doono inay iska caabbiso gardarrada Ruushka.
Go’aan midkaasi oo kale ah ayaa waxaa qaadatay dowladda Mareykanka, Hasayeeshee madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin ayaa wacad ku maray inuu ballaarin doono weerrarka ay ciidammadiisa ka wadaan gudaha waddanka Ukraine haddii dalalka reer Galbeedku ay Kyiv u soo diraan hubka ridada dheer.
Putin oo wacad ku maray inuu dhul hor leh weerari doono haddii reer Galbeedku ay hub u soo diraan Ukraine
Dowladda Ruushka waxa ay ballaarin doontaa weerrarka ay ka waddo gudaha waddanka Ukraine haddii dalalka reer Galbeedka ay hubka ridada fog u soo diraan, madaxweyne Vladimir Putin ayaa sidaasi sheegay.
Digniinta ayaa imanaysa xilli Axaddii qaraxyo ay gilgileen qeyba ka mid ah magaalada Kyiv, taas oo ah weerrarkii ugu horreeyay ee caasimadda lagu qaado muddo todobaadya ah.
Ruushka ayaa sheegay inuu bartilmaameedsaday taangiyo ay soo dhiibeen dalal reer Yurub ah. Ukraine-se waxa ay sheegtay in goobtaasi ay aheyd warshad lagu dayactiro khadadka tareennada.
Caasimadda ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ka dhacay duqeymo aanan badneyn kaddib markii Ruushka uu dedaalladiisa isugu geeyay gobolka Donbas.
Xilli Ruushka uu halkaas – boqollaal kiilomitir oo bariga ku yaal – ka samaynayo horumar gaabis ah balse sugan ayaa dhowr dal waxa ay ku yabooheen inay Kyiv u diri doonaan hub casri ah.
Dhawaan ayey aheyd markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu hannaanka gantaallada ee sare ee HIMARS uu Ukraine u diri doono, hubkaas oo ka kooban gantaallo la hago kuwaas oo garaaci kara bartilmaameed 70km ka fog meesha ay yaallaan, hubkaas oo gaari kara wax ka badan inta ay gaaraan aartelariga ay haatan Ukraine haysato.
Saraakiisha Aqalka Cad ayaa sheegaya inay ogolaadeen inay gantaallada bixiyaan haddii uu madaxweyne Zelensky u xaqiijiyo in hubkaasi aanan loo isticmaali doonin in loo adeegsado weerrar lagu ekeeyo bartilmaameedyo gudaha Ruushka ah.
Kaalmadaasi ayaa waxaa ku jira diyaarado qumaati u kaca, lidka taangiyada, gawaarida xeeladda loo isticmaalo iyo qalab dayactir ah.
Jarmalka ayaa sidoo kale ballanqaaday inuu diri doono hannaanka ugu casrisan ee Iris-T ee difaaca si Ukraine ay ugu suuragasho inay difaacdo in magaalo dhan ay ka difaacdo duqeynta cirka ee Ruushka.
Wareysi uu Putin Axaddii siiyay taleefishinka qaranka Ruushka, ayuu waxa uu ku sheegay in: “Guud ahaan walaaca laga qabo saadka milateri ee dheeraadka ah, aniga waxa ay ila tahay in laga leeyahay hal yool oo kaliya, oo ah in colaaddan la sii ballaariyo inta ay suuragalka tahay.”
Hogaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in hubka Mareykanka uu siinayo Ukraine uusan ahayn “wax cusub”.
Hasayeeshee waxa uu ka digay in la soo diro gantaallada ridada dheer: “Haddii hubkaas la soo siiyo, waxaannu gaari doonnaa go’aannada ugu habboon iyo hubkayaga aan adeegsanaynaba, kaas oo aynu haysanno wax nagu filan, oo aynu ku garaaci karno bartilmaameedyada aynaan weli garaacin.”
Dhankeeda Ukraine, kuxigeenka wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa ay wadammada reer Galbeedka waydiisatay inay si degdeg ah ku soo diraan hubka si uu dalkiisa gacan uga siiyo inay jabiyaan Ruushka.
“Waxaannu ku jirnaa dagaal daba dheer marka waxaan u baahannahay taageero joogta ah. Reer Galbeedku waa inay fahmaan in kaalmadoodu aanay noqon mid hal mar uun ah, hasayeeshee ay noqoto mid socota illaa guusha laga gaarayo,” ayey Hanna Malyar u sheegtay warbaahinta maxalliga ah.
Mid ka mid ah dagaalladii ugu cuslaa ayaa haatan waxa uu ka soconayaa magaalada Severodonetsk.
Ms Malyar ayaa waxa ay sheegtay in ciidammada Ukraine ay si xooggan isaga caabbinayaan ciidammada duullaanka ah xaaladduna ay “aad u adag tahay”.
Janaraal kale oo Ruushka u dhashay – Roman Kutuzov – ayaa waxaa lagu dilay dagaalka Donbas, waxaa sidaasi sheegay ruug caddaa Ruushka u dhashay oo soo tabiyay wararka dagaallada.
Weriyaha taleefishinka qaranka, Alexander Sladkov ayaa sheegay in Kutuzov, oo ka tirsanaa ciidammada gaarka ah, uu geeriyooday “mar uu raggiisa ku hogaaminayay dagaalka”.
Farriinta Sladkov ee Telegramka uu soo dhigay ayaanan kala cadayn halka iyo sida Kutuzov loo dilay. Waxa uu sheegay in Kutuzov uu ahaa janaraalkii afraad ee Ruushka u dhashay eek u dhinta dagaalka Ukraine.
Ila wareedyada Ukraine ee reer Galbeedka ayaa tirada janaraallada laga dilay Ruushka waxa ay ku tilmaamayaan inay middaas ka sarrayso. 26-kii Maarso sarkaal reer Galbeed ah ayaa sheegay in Janaraal Yakov Rezantsev uu ahaa janaraalkii todobaad ee Ruushka laga dilo. Hasayeeshee 24-kii May waxaa la soo tebiyay geerida janaraalkii ciidammada cirka Kanamat Botashev.
Barasaabka gobolka Luhansk ayaa sheegaya in ciidammada Ukraine ay weli joogaan magaalada Severodonetsk, hasayeeshee ay sugayaan inay soo gaaraan hubka casriga ah ee ay ku deeqeen xulafada reer Galbeedka.
“Markii ay ina soo gaaraan in nagu filan oo hubka ridada dheer ee reer Galbeedka, waxaannu deegaannadayada ka saari doonnaa madaafiicdooda. Markaas kaddib, I aamin, ciidammada dhulka ee Ruushka waa ay iska carari doonaan,” ayuu yiri Serhiy Haidai.